Ny tena tranon'Andriamanitra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Ny fiangonana marina
Rehefa nodorana tao Paris ny katedraly "Notre Dame", dia nisy alahelo lehibe tsy tany Frantsa ihany, fa nanerana an'i Eropa sy ny tontolo hafa. Ny entana tsy azo tratrarina dia noravan'ny lelafo. Ireo Vavolombelona hatramin'ny tantara 900 taona dia nolevonin'ny setroka sy lavenona.
Ny sasany dia manontany tena raha famantarana fampitandremana ho an'ny fiarahamonintsika izany satria nitranga nandritra ny Herinandron'ny herinandro? Tany Eropa, ny toerana ivavahana sy ny "lova Kristiana" dia kely kokoa ary tsy misy lanjany ary matetika voahitsaka mihitsy aza.
Inona no eritreretinao rehefa miresaka momba ny toeram-pivavahana ianao? Katedraly ve izy io, na fiangonana sa trano fiangonana, na efitrano voaravaka sa toerana tsara tarehy eo amin’ny natiora? Teo am-piandohan’ny fanompoany, i Jesosy dia nandray ny heviny momba ny “tranon’Andriamanitra”. Taloha kelin’ny Paska, dia noroahiny nivoaka ny tempoly ireo mpivarotra ary nampitandrina azy ireo mba tsy hanova ny tempoly ho fivarotana lehibe. Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe: Inona no famantarana asehonao aminay, hanaovanao izany? Jesosy namaly azy hoe: Ravao ity tempoly ity, fa amin'ny hateloana dia hatsangako indray izy. Dia hoy ny Jiosy: Ity tempoly ity dia natao tamin’ny 46 taona, ka ianao va hahatsangana azy amin’ny hateloana? (Johanes 2,18-20). Inona no tena noresahin’i Jesosy? Ho an’ny Jiosy dia tena nanahiran-tsaina ny valin-teniny. Andeha hovakiantsika hoe: “Fa ny tempolin’ny vatany no nolazainy. Ary rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy, dia tsaroan’ny mpianany fa efa nilaza izany taminy Izy; ka dia nino ny Soratra Masina sy ny teny izay nolazain’i Jesosy izy ireo » (and 21-22).
Ny vatan'i Jesosy dia ho tena tranon'Andriamanitra. Ary rehefa afaka telo andro tao am-pasana, dia natsangana indray ny vatany. Nahazo vatana vaovao avy amin'Andriamanitra izy. Nanoratra i Paoly fa isika, satria zanak'Andriamanitra, dia anisan'ity vatana ity. Tao amin'ny taratasiny voalohany dia nanoratra i Peter fa tokony hanana vato voaorina ao amin'ity trano ara-panahy ity isika raha mbola velona.
Ity tranon’Andriamanitra vaovao ity dia sarobidy lavitra noho ny trano tsara tarehy rehetra ary ny tena mampiavaka azy dia: Tsy azo rava! Andriamanitra dia nanamboatra “programa fanorenana” lehibe izay efa nisy hatramin’ny taonjato maro. “Koa tsy vahiny sy vahiny intsony ianareo, fa mpiray tanindrazana amin’ny olona masina sy ankohonan’Andriamanitra, izay naorina teo ambonin’ny fanorenan’ny Apostoly sy ny mpaminany, satria Jesosy Kristy no vato fehizoro izay itomboan’ny trano rehetra ho tempoly masina ao amin’ny tempoly. Tompo ô. Amin’ny alalany koa no hanorenana anareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy » (Efes 2,19-22). Ny trano fanorenana tsirairay dia nofidin’Andriamanitra, omaniny mba hifanaraka tsara amin’ny tontolo iainany. Ny vato tsirairay dia manana ny asany manokana sy ny asany! Ka ny vato rehetra amin'ity vatana ity dia tena sarobidy sy sarobidy!
Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia napetraka tao am-pasana, dia nisy fotoana tena sarotra tokoa ho an'ny mpianatra. Inona no dingana manaraka? Very maina ve ny fanantenantsika? Niparitaka sy diso fanantenana ny fisalasalana, na dia nampahafantatra azy ireo imbetsaka aza i Jesosy momba ny fahafatesany. Ary aorian'izay ny fanampiana lehibe: velona i Jesosy, efa nitsangana izy. Nasehon'i Jesosy tao amin'ny vatany vaovao imbetsaka, mba tsy hisalasalana. Tonga mpianatra nanatri-maso ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ireo mpianatra ary nitory famelan-keloka sy fanavaozana amin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra. Ny vatan'i Jesosy dia teto an-tany tamin'ny endrika vaovao.
Ny fanahin’Andriamanitra dia mandrafitra vato fanorenana tsirairay izay iantsoan’Andriamanitra ny trano ara-panahin’Andriamanitra vaovao. Ary mbola mitombo io trano io. Ary tahaka ny nitiavan’Andriamanitra ny Zanany no nitiavany ny vato rehetra. « Ary hianareo koa, tahaka ny vato velona, ​​dia ataovy ho trano fanahy sy fisoronana masina, mba hanateranareo fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Izany no ilazan’ny Soratra Masina hoe: “Indro, Izaho mametraka vato fehizoro voafidy tsara ao Ziona, ka izay mino Azy dia tsy ho menatra”. Ankehitriny ho anao izay mino fa sarobidy izany. Fa ho an’izay tsy mino kosa dia “vato izay nolavin’ny mpanao trano fa efa tonga fehizoro” (1. Petrus 2,5- iray).
Manavao anao isan'andro isan'andro amin'ny fitiavany i Jesosy, hany ka miditra ao amin'ity trano vaovao ity ianao ho voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny ianao dia mahita izay ho eo aloka ihany, fa tsy ho ela dia hahita ny hakanton'ny zava-misy marina rehefa tonga i Jesoa amin'ny voninahiny ary hampiditra ny tranon'Andriamanitra vaovao amin'izao tontolo izao.